Barnaamijyo lagu abuurayo fiidiyowyo qabow oo lagu guuleysto | Abuurista khadka tooska ah
Maanta, fiidiyowyadu waa mid ka mid ah siyaabaha doorbidaya in lala xiriiro. Tagay waa baloogga, qoraallada iyo xitaa sawirrada. Cusboonaysiinta, oo socotey dhowr sano hadda, waa sawirro dhaqaaq ah oo aad ku duubi karto, ha noqoto taleefanka gacanta ama qalab xirfad leh. Dhibaatadu waxay tahay kadib markaa waa inaad isticmaashaa barnaamijyo si aad u abuurto fiidiyowyo tayo leh waana meesha aad waxoogaa ku waayi karto.
Markaa, markii aad abuurkaaga u soo dejineyso YouTube, Maalin kasta ama barnaamij kale oo fiidiyoow ah waa tan ugu wanaagsan ee ugu macquulsan iyo xirfad-yaqaannimo, hoosta waxaan ka hadli doonnaa dhowr barnaamijyo lagu abuuro fiidiyowyo. Marka, hadday mashruuc tahay ama inay nolol siineyso kanaal, waxaad hubin doontaa inuu hagaagsan yahay iyo inuu siinayo sawirka aad rabto inaad mashruuc ka dhigato.
1 Waxa maskaxda lagu hayo marka la samaynayo fiidiyowyada
1.1 Isku day inaad sameyso fiidiyowyo tayo leh
1.2 Kobcinta qoraalka
1.3 Ka taxaddar sawirada
1.4 Barnaamijyada lagu abuurayo fiidiyowyada: kuwani waa kuwa ugu fiican
1.5 Barnaamijyada lagu abuurayo fiidiyowyada: Avidemux
1.7 Barnaamijyada lagu abuurayo fiidiyowyada: Adobe After Effects
1.9 Barnaamijyada loogu talagalay sameynta fiidiyowyada: Avid Media Composer
1.11 Barnaamijyada lagu abuurayo fiidiyowyada: Sony Vegas Pro
1.12 Barnaamijyo lagu abuurayo fiidiyowyo: Filmora
Waxa maskaxda lagu hayo marka la samaynayo fiidiyowyada
Haddii aad tahay naqshadeeye ama youtuber, waxaad ogtahay in sameynta fiidiyow soo jiidanaya oo si wanaagsan loo qabtay ay kaa caawin doonto inaad hagaajiso kuwa raacsan. Haa, ka sokow waxaad kudareysaa tayada fariintaada oo aad sameysaa wax kumanaan qof ay jecelyihiin, weli wali. Laakiin maxaad maskaxda ku haysaa inaad abuurto fiidiyowyo?
Isku day inaad sameyso fiidiyowyo tayo leh
Taasi waa, iskuday inaadan ruxin kamarada, taasi dhaqso ha u dhaqaajin (Waxay ka dhigi kartaa qof kasta oo arkaa inuu wareersan yahay) iyo inuu yahay mid fiiqan oo lagu kala sooci karo. Taasi waxay tusineysaa inaad daryeesho xasiloonida, laydhka iyo dhammaan dhinacyada saamaynta ku leh waxa aad duubayso.
Marka aad sameyso, isku day inaad aragto, ma sameyn laheyd ilaa dhamaadka ama ma jiraan waxyaabo aadan jeclayn? Waa inaad iskudaydaa inay jiraan waxyaabo aad uyar oo aad uyar oo aadan jeclayn.
Hadday tahay hadal ama mid qoran, waxaad rabto waa in kuwa ku arka ay ku fahmaan, sax? Sidaa darteed, waa inaad taqaanaa sida loo dhawaaqo, si tartiib ah ugu hadal oo wixii ka sarreeya dhammaantood u isticmaal jirkaaga iyo luqadda lagu hadloba.
Haddii aad sidoo kale ku darto qoraal qoran fiidiyowyada, si fiican uga taxaddar khaladaadka higgaadinta maxaa yeelay waxaad sameyn kartaa fiidiyowyo tayo leh oo cillad ku dhacday.
Ka taxaddar sawirada
Haddii aad geleyso sawirro, Hubso in kuwani aysan soo bixin pixelated (badanaa maxaa yeelay way aad u yaryihiin oo fiidiyowga way kala baxaan). Isku day inaad ahaato mid tayo leh, inay u muuqdaan kuwo wanaagsan oo ay u socdaan sida ku xusan fiidiyowga aad abuureyso.
Barnaamijyada lagu abuurayo fiidiyowyada: kuwani waa kuwa ugu fiican
Hadda markaad tixgeliso faahfaahintaas yar ee aan horay u soo sheegnay, waa waqtigii laga fakari lahaa barnaamijyada lagu abuurayo fiidiyowyada aad isticmaali karto. Rumayso ama ha rumaysan, waxaa jira xulashooyin badan, oo bilaash ah iyo kuwo lacag lagu bixiyo. Marka waxaan xulnay qaar kamid ah si aad uxulato midka aad ugu jeceshahay. U kac iyada?
Barnaamijyada lagu abuurayo fiidiyowyada: Avidemux
Avidemux waa tifaftire fiidiyoow aad caan u ah, sidoo kalena waa midka ugu isticmaalka badan. Waxa ugu fiican oo dhan waa inay lacag la’aan tahay iyo, marka lagu daro, waa la taageeraa inaad Windows, Linux, Mac ...
Taas ayaa kuu ogolaaneysa? Hagaag, heer aasaasi ah, ku dar fiidiyowga oo ku dheji raadadka maqalka dusha ama xitaa fiidiyow kale oo sawirro leh, si aysan u aheyn kaliya fiidiyowga aad duubtay. Ama xitaa waad ka samayn kartaa xoq, adoo abuuraya fiidiyow kuu gaar ah oo leh sawirro, qoraallo, iwm.
Marka ay timaaddo keydinta fiidiyowga, waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku sameyso AVI, MP4 ama MKV.
Barnaamijkan wax ka beddelka fiidiyowga wuxuu ka socdaa shirkadda Apple, haddana wuxuu ka mid yahay kuwa ugu badan ee ay adeegsadaan xirfadleyda. Waxay leedahay a interface aad u dareen leh oo sahlan in la isticmaalo waxaa la Iyo waxa ugu fiican waa inay u shaqeyso muuqaal ahaan, taasi waa, waxaad arki doontaa nidaamka iyo natiijada isla waqtigaas.
Kaliya hal dhibaato ayey leedahay oo ah in nidaamka uu ku shaqeeyo uu yahay Mac, looma heli karo dadka kale sida Windows ama Linux.
Barnaamijyada lagu abuurayo fiidiyowyada: Adobe After Effects
Xigasho: barnaamijyada loogu talagalay sawirrada
Barnaamijkani ma aha mid bilaash ah. Waxay iska leedahay Adobe Premiere Pro. Mana dhihi karno way fududahay in la isticmaalo sidoo kale; runtu waxay tahay inaysan ahayn, waxay u baahan tahay heer sare ee sayniska kombiyuutarka (iyo barnaamijyada fiidiyowga). In kasta oo casharro la qaato, oo waqti badan la huro, waxaad heli kartaa wax aan caadi ahayn.
Waxa ugu fiican ee barnaamijka ku saabsan ayaa ah kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan animations, naqshadeynta 3D, dhaqdhaqaaqa iyo saamaynta. Natiijadu waa fiidiyow tayo fiican leh (haddii aad waqti u hurto), xirfadle taasina saameyn ayey ku yeelan doontaa.
Dabcan, waxay diiradda saareysaa mashaariicda marka loo fiiriyo kanaalada fiidiyowga (maxaa yeelay maadaama ay u baahan tahay waqti dheeri ah si loo abuuro, ma soo dejin kartid dhammaan fiidiyowyada aad rabto.
Barnaamijyada lagu abuurayo fiidiyowyada, kani waa midka ugu fudud uguna dhaqsaha badan. Kuu ogolaanayaa inaad wax abuurto fiidiyowyo ku saleysan arrimo cayiman oo horay loo sii qeexay (ama aad ka abuurto xoq). Iyo fiidiyow noocee ah? Hagaag, waxay noqon karaan bogag, sheekooyin loogu talagalay Instagram, fiidiyowyo si loo sameeyo isbarasho fiidiyoow, demo, isjiidka, iwm.
Waad ku dari kartaa codka sidoo kale maaddaama ay leedahay maktabad ay ku jiraan qaybo bilaash ah oo kaa caawin doona inaad hagaajiso fiidiyahaaga.
Barnaamijyada loogu talagalay sameynta fiidiyowyada: Avid Media Composer
Ku sii wad barnaamijyada si aad u abuurto fiidiyowyo heer mihnadeed ah, waxaad leedahay Avid Media Composer. Waa a tifaftiraha fiidiyowga oo aad iyo aad u sii dhawaq sameeya isla markaana leh saamayn muuqaal ah, codad iyo fiilooyin taas oo siinaysa taabasho gaar ah fiidiyahaas aad rabto inaad abuurto.
Waxa kaliya ee xun ee ku saabsan waa in aysan 100% xor aheyn. Waxay leedahay nooc bilaash ah, oo aad u kooban; iyo lacag bixin kale oo ku kici karta 25 Euro bishii.
Waxaad u haysaa labada Mac iyo Windows labadaba (Linux ma taageerto).
Mid ka mid ah barnaamijyada lagu abuurayo fiidiyow ee aan kugula talineyno waa AVS. Waxay leedahay dhibaato, taasna waa in laga heli karo oo keliya Windows, laakiin waa lacag la'aan. Adiga ayaa ku awoodi doona inaad ku gooyso, u qaybiso fiidiyowyada, u rogto sawirrada ...
Muuqaal ahaan waxay umuuqataa xoogaa sida Windows Movie Kan sameeyey, iyo habka ay u shaqeeyaan aad ayey isugu egyihiin, sidaa darteed haddii aad jajabin lahayd barnaamijkaas, tan waxaad kuheli doontaa isla natiijada.
Hadda waxay sidoo kale u oggolaaneysaa fiidiyowyada in loo habeeyo qaabab kala duwan (maahan oo keliya kombuyuutar, laakiin sidoo kale taleefannada gacanta, ama loogu soo wareejiyo goobaha internetka).
Barnaamijyada lagu abuurayo fiidiyowyada: Sony Vegas Pro
Tani waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan ee fiidiyowga abuurista, iyo adeegsadayaasha horumarsan, oo loo yaqaan kuwa badan oo la shaqeeya fiidiyowyada Waxay leedahay is-dhexgal la habeyn karo laakiin ma sahlana in lala shaqeeyo haddii aad bilow tahay. Xitaa sidaas, Waxay u leedahay nooca Studio Movie ee kuwa doonaya inay bartaan sida loo isticmaalo.
Waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican suuqa loogu talagalay abuurista fiidiyowyada waxaana loo heli karaa oo keliya Windows.
Barnaamijyo lagu abuurayo fiidiyowyo: Filmora
Filmora waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan dunida maqalka, mana ahan barnaamij kaliya in la abuuro fiidiyowyo, laakiin sidoo kale waad isku dari kartaa, qaybin kartaa, goyn kartaa ... Marka la soo koobo, waxaad ku ciyaari doontaa xeelado. Waxay leedahay dhowr miirayaal, iyo sidoo kale saamaynta muuqaalka oo waad ku dari kartaa animations. Marka lagu daro barnaamijyada kale ee aysan lahayn waa awooda baabiinta buuqa, si loo arko looxyada ...
Waa bilaash, in kasta oo ay leedahay nooc lacag ah oo aad ku heli doonto kumanaan ilo oo aad wax kaga beddelaan. Kaliya ku habboon nidaamka Windows iyo Mac.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Barnaamijyo lagu abuurayo fiidiyowyo
Koorsooyinka 10ka Aasaasiga ah iyo kuwa Sare ee Photoshop